I-Pre-incarnation Izivumelwano phakathi koBuntu
Izivumelwano zomphefumlo ziyizivumelwano zengqesho zangaphambili phakathi kwabantu ababini okanye ngaphezulu. Inyiyo emva kwesivumelwano somphefumlo ibandakanya iziganeko zobomi ezikhulelwe ngaphambi kokuzalwa. Imiphefumlo ikhetha ubudlelwane kunye nezibophelelo zentsapho ngokusekelwe kwizifundo abafisa ukuzifunda kwifom yabantu. Kukho ukucinga phakathi kwamanye amaqela okomoya ukuba ukukhula komphefumlo kunokuqhubela phambili ngokukhawuleza ngokuzibandakanya komntu kunesimo somoya.
Ukwenza izivumelwano zomphefumlo ngaphambi kokuzalwa kunika imiphefumlo isicwangciso sezemidlalo sokusebenzisa ukuqhubela phambili iinjongo zabo zokukhula ngokomoya xa ukhetha ukuzalwa kwangaphambili.
Izivumelwano zomphefumlo okanye izivumelwano ezivame ukususela kwifilosofi yeGaia, ngumgaqo obonisa ukuba izinto eziphilayo kwiplanethi zisebenzisana neendawo ezizungezile kwaye ziya kuthintela uhlobo lwalo, ukuze zenze indawo yazo igcinwe kwiimeko zokuphila. Le ngqungquthela yenziwa nguJames Lovelock kwaye igama layo lisekelwe kwisixokelelwano seGrisi seMhlaba, uGaia.
Izivumelwano zomphefumlo kunye nokuhlaziya
Izivumelwano zomphefumlo azenzelwe ukuba zikhuseleke okanye zibekwe kwilitye ezisekelwe kwinkolelo yokuba "ukukhetha okukhululekile" kuqhotyoshelwe ebomini bomntu. Ukuthetha ngokuchanekileyo, kunokukholelwa ukuba izivumelwano zomphefumlo zakha iziqendu . Ngenxa yokuba iiplani ezicwangciswe kakuhle kunye neenjongo azihlali zihlala ebomini, akukho ziphumo ezinzulu zokomoya. Ukuhlala kokomoya akusoloko kunengqiqo ebonakalayo eyenziwa ngabantu abajongene nayo imihla ngemihla.
Izivumelwano zomphefumlo zivame ukuxoxisana ngokulandelelana emva kwexesha lokuphila ukuze zilungelelanise kwiimeko eziphazamisa iziganeko zangaphambili.
Iintsebenziswano Zomoya kunye neebhondi zeKarmic zihluke njani
Ngokungafani nxu lumano olunzulu noluntu oluqinileyo, abantu abadibeneyo ngezivumelwano zomphefumlo bakhetha ukuxhoma kunye ngezizathu ezahlukeneyo.
Khawuxubushe ingxoxo phakathi kwabahlobo bomphefumlo obengaphambi kokuzalwa, "Wow, kuya kuba kuhle ukuba ixesha elizayo silungiselele ukuba sibe ngabantakwabo, amaqabane abashishini okanye abathandi."
Ulwalamano lwe-Karmic ludla ukuba luhlobo lwamandla okuphuthuma kubo, ukubuyisela abantu ndawonye ukuba babuyisele, bahlawulele ityala, bavelise ukungafani kwabo, okanye benze izilungiso zokungahambi kakuhle. Xa i- karma ixutywe, ubudlelwane bunokuziva bukhululekile okanye bubopha ngokungathi akukho nto iphunyukileyo.
Nabani na odibene naye, ngokuvumelana ngokuvumelana nezivumelwano zokuzalwa kwangaphambili, ngokuqhelekileyo ungumhlobo osenza sihlekise, umntu ongumcebisi othembekileyo, okanye umntakwabo othandekayo esiyithandayo. Izivumelwano zomphefumlo okanye izivumelwano zomoya zivame ukucwangciswa kunye okanye ezinye izigatshana ezakhiweyo ukuze uzive ukhululekile. Ngokuqhelekileyo akukho mvakalelo okanye uvakalelo lweembopheleleko kwiintsebenziswano.
Izivumelwano zoMoya weTough Love
Ngezinye izikhathi izivumelwano zomphefumlo zisekelwe eluthandweni olunzima . Ngokomzekelo, umphefumlo unokufuna ukulahlwa, ukushiya okanye enye imvakalelo enzima kwindlela yomntu. Omnye umphefumlo ungavuma ukuba uthathe indima ye-nemesis ukufaka lolu hlobo lwamava. Ngamehlo entshaba, umphefumlo onobungane unokubukela ngothando.
Ngezantsi umzekelo wesigqibo somphefumlo womphefumlo, "Umfana Ophukayo":
"Kwiminyaka emininzi edlulileyo, emsebenzini, umntu wangena ebomini bam." Bobabili babenomzuzwana we "namaste", nangona andithengi loo nto into elula kakhulu. ukuba uvakalelwa kukuba kufuneka sibe yinxalenye yobomi bomnye nomnye, kwaye ufanele ukuba andithande, nangona ndibe nobuhlobo obuzimeleyo ngeli xesha lonke. Wandiqhayisa, nangona ndakhula ukumazi njengomnye wabantu abamangalisa kakhulu endingadibana nayo. Xa senza umgudu ebuhlotsheni bethu, thina sibini sithatha uthando oluninzi kunye nokukhanya kubomi bomnye ngamnye, kodwa kuye kubekho isibini ngoku apho omnye wethu emlimaza omnye kwaye uya kunqaba ukudibana nomdla kunye nemfesane ukuxazulula imbambano. Uyabhubha ngokusemthethweni ebomini bam, besishiya bobabili sididekile kwaye sibuhlungu. Ndinekholo lokuba siza kuqaphela ingqesho yomphefumlo wethu ngelinye ilanga, kwaye ndiza kugcina umonde wam kude kube yinto elandelayo. " Sally
Cand Cand Ear
Isixhobo Sokuxhobisa Ngokwabo
Igalari yeTermal yezilwanyana: iArtictic / Tundra Totems
Ukuqonda indlela i-Psychic Vampire Attack eyenzeka ngayo
Igama loMoya litshintsho
Ukuvula Intliziyo Yakho
Ibhola 101 - Izikhundla eziSeko zoKhuselo
Inkcazo kunye nemizekelo ye-Greengrocer's Apostrophe
Izizathu Ezi-5 Awuyena Umculi Omuhle (Kodwa)
Biography ka Anne Anne
I-Case kaFr. John Corapi
Iikhomputha kunye neComputer Peripherals eMandararin
Isikhokelo soBungcali kwiZiseko zeDrafty to Help You Become Master!
IsiShayamthetho sesiSilamsi: I-PBUH
Yintoni eyenzekayo kwiCandelo lokuPhucula ngeNdlela?
Indlela yokuLahla iintlobo zeeNtsana
Amanqaku ama-Hindu omtshato womtshato
Iimfono eziMnandi ngeeNkxaso zoTitshala
Umnandi uHillary Clinton Memes
6 I-Tony Award Winning Musicals Nge-Dark Side
Kuwait | Iinkcukacha kunye neMbali